Pita အတွက်ကြော် shavermy
လက်တို့သည်အစဉ်အမြဲရှင်းလင်းလျက်ရှိရာပြီးနောက်အလုပ်လုပ်တစ်ခုသို့မဟုတ်အမြန်ရေစာများအတွက်လေ့လာဖို့သင်တို့နှင့်အတူအယူအဆင်ပြေဖြစ်သောလှပသော appetizer, ။ အောက်ကအဆိုပြုထားချက်ပြုတ်နည်းများအပေါ်တစ်ဦးအရသာ kebab အောင်ကြိုးစားပါ။
pita မုန့်အတွက်ကြက်သားနှင့်အတူနေအိမ် shaverma - စာရွက်
ကြက်သား (ရင်သားလွှာနှင့် bedryshek) - 475 ဂရမ်;
ခရမ်းချဉ်သီးအခိုငျအမာဇာတိပကတိ - 145 ဂရမ်;
မုန့် 20% - 80 ဂရမ်,
သခွားသီး - 125 ဂရမ်;
Mayonnaise - 80 ဂရမ်,
ဟင်း (အမှုန့်) -5ဂရမ်,
ချိုမြိန်ကြက်သွန် (ခရမ်းရောင်) - 35 ဂရမ်,
ကြက်သားကိုဆီ၏သေးငယ်တဲ့ငွေပမာဏအတွက်ပျမ်းမျှအားအရွယ်အစားနှင့်ကြော်၏ strips တွေသို့ခုတ်ဖြတ်။ သွေ့ခြောက်ကြော်ဒယ်အိုးအပေါ်အနည်းငယ်ပူနွေး lavash စာရွက်နှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်အလယ်တန်းအရွယ်ကိုအပိုင်းပိုင်းခုတ်။ ကြက်သွန် Slicer အရှိဆုံးပါးလွှာဝက်ကွင်းပေါ်တွင်အကောင်းဆုံးဖြတ်။
အချဉ်မုန့်, နနွင်းနှင့်ဟင်းအမှုန့်နှင့်အတူ Mayonnaise ရောစပ်ခြင်းဖြင့်ထိုငံပြာရည်လုပ်ပါ။
နွေး pita ပျံ့နှံ့ကြက်သားတစ်စာရွက်တွင်, ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကိုပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်စေတနာစိတ်ငံပြာရည်လောင်း။ pita မုန့်အလိပ်ဖွင့်, အအေးအချိန်မ shaverma မှချက်ချင်းဝတ်ပြုကြလော့။
အိမ်မှာ pita မုန့်အတွက် kebab ချက်ပြုတ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
ရင်သားကင်ဆာလွှာနှင့်ပေါင် - 975 ဂရမ်;
ဇီ, နံနံ, cardamom - 1/2 Tsp ;.
paprika (အမှုန့်) -5ဂရမ်,
သံပုရာဖျော်ရည်ကို - 10 ml ။
ထူသောဒိန်ချဉ်, သဘာဝ - 175 ဂရမ်;
ဇီ -5ဂရမ်
အနီရောင်ဂေါ်ဖီထုပ် - 75 ဂရမ်,
မုန္လာဥနီ - 65 ဂရမ်,
Mint, စိမ်းလန်းသော - 1 sprig;
ပထမဦးစွာသင်ကြက်သား, အသေးစားချပ်သို့ Pre-သွေးတွေစီးထွက်လာစိမ်ဖို့လိုအပ်: နံ့သာများနှင့်ဂရုတစိုက် obmazhte အသား dobyvte သံပုရာဖျော်ရည်ကိုရောမွှေပါ။ ချက်ပြုတ်သည်အထိ 25 မိနစ်ပြီးနောက်, ကြော်။
သေးငယ်သောခြင်း, မုန်လာဥနီများနှင့်အနီရောင်ဂေါ်ဖီထုပ်ခုတ်သည့်ကြေမွ Mint အရွက် add အပေါင်းတို့နှင့်အတူသံပုရာဖျော်ရည်ကိုသွန်းလောင်း။ ထိုအခါသင်သည် shavermy ၏ဖွဲ့စည်းခြင်းမှဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါ။ pita မုန့်ပေါ်ပထမဦးဆုံးပြန့်ပွားသုပ်, ရက်ရက်ရောရောငံပြာရည်လောင်းကြက်သားနှင့်လိပ်လိပ်ထားတော်မူ၏။
pita အတွက်အိမ်မှာ Shaverma
Lavash စာရွက်များ -2ယူနစ်။
shavermy ငံပြာရည် - 175 ဂရမ်;
ကြက်သားခြေထောက် - 275 ဂရမ်;
Mayonnaise - 65 ဂရမ်,
ခရမ်းချဉ်သီး - 75 ဂရမ်,
သခွားသီး - 65 ဂရမ်,
ပင်ပေါက် - 75 ဂရမ်,
မှို - 125 g နဲ့;
ရေနံ "ကျေးလက်" - 25 ဂရမ်,
ဒိန်ခဲ - 95 ဂရမ်,
ကြက်သားအဘို့နံ့သာမျိုး - 25 ဂရမ်,
ပိန်ရေနံ - 35 ml ။
ပထမဦးစွာမဆိုယခင်ကဖော်ပြထားစာရွက်အညီတစ်ဦးငံပြာရည်ပါစေ။ အဆိုပါဟင်းသီးဟင်းရွက်များတွင် marinated အသား, နှင့်၎င်း၏ Mayonnaise ပြင်ဆင်ပါနှင့်ထောပတ်အနည်းငယ်အတွက်အပူဒယ်အိုးပေါ်မှာချက်ပြုတ်သည်အထိ 15 မိနစ်ချက်ပြုတ်။ ယင်းအစိုဓာတ်ကိုမှီတိုငျအောငျကြော်ထုကုန်တယ်မှိုအငွေ့ပျံခြင်းနှင့်ဒိန်ခဲခြစ်။
pita မုန့်ငံပြာရည်အပေါ်ပျံ့နှံ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်အဆာတဝက်မှိုနှင့်အသားပြန့်နှံ့ပြီးတော့အချို့ဒိန်ခဲလွဲချော်။ ငံပြာရည် pritrusite ဒိန်ခဲလောင်းနှင့် pita မုန့်အလိပ်တက်လှိမ့်။ အလင်း Rouge နှင့်အရသာအထိကြော်ဒယ်အိုးထဲမှာနွေး kebab ။
Duck လွှာ - ချက်ပြုတ်နည်းများ
အိမ်မှာ Hummus - စာရွက်
ချယ်ရီဇီးသီး၏ tkemali ချက်ပြုတ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
စွပ်ပြုတ် - စာရွက်
"Garnet လက်ကောက်" - စာရွက်
မော်ဒယ်များကိုယခုနှစ်အတွက်သက်ဆိုင်ရာနေသော - ဂျင်းဘောင်းဘီ 2017 ဝမ်းခွဲ?
Chaillu LaBeouf မူးဘို့ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသည် "Transformers" ၏ကြယ်ပွင့်
ခိုင်မာတဲ့ toxicosis - ဘာလုပ်သနည်း
Sciatica - ရောဂါလက္ခဏာများနှင့်ကုသရေး
ခြေသည်းအဂျာကင်အင်္ကျီ - ထိုဂန္လက်သည်းဒီဇိုင်းကိုအကောင်းဆုံးဗားရှင်း 32 ဓါတ်ပုံ
ကျွန်မကိုယ်ဝန်ရှိ Mukaltin နိုင်သလား?